Interview with Ko Khin Maung Htwe (Supervisor of Pansy Spa) - Your Fitster Health & Beauty (Myanmar)
Interview with Ko Khin Maung Htwe (Supervisor of Pansy Spa)
November 27, 2019 | by Pansy Spa
ယခုတစ်ပတ်မှာ‌တော့ Pansy Spa ရဲ့ Supervisor ဖြစ်တဲ့ Ko Khin Maung Htwe နဲ့ အင်တာဗျူးကို ‌ဖော်‌ပြ‌ပေးလိုက်ပါတယ်။
Ko Khin Maung Htwe
“ လူတိုင်းမှာစိတ်ဖိစီးမူများစွာ အလုပ်အကိုင် ပင်ပန်းမှုများအတွက်ကတော့ ကျန်းမာရေး အတွက်ကတော့ အထောက်အကူအဖြစ် သွားသင့်တဲ့ နေရာမျိုးမို့အကြံပြုချင်ပါတယ် ”
အစ်ကို့ အကြောင်းလေး အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါအုံး?
ကျွန်တော် နာမည်က Ko Khin Maung Htwe ပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်က 2012 ထဲက ဒီပညာကိုစလေ့လာခဲ့ပြီး Japanese Spa ပညာရပ်ကို အလွန်ဝါသနာပါလို့ အခြေခံဝန်ထမ်းဘဝကနေ ယခုဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ချိန်အထိ လေ့လာကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။
ဒီ Spa ဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပုံလေးနဲ့ ခုဆို ဘယ်နှစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပြီလဲ?
၂၀၁၂ ခုနှစ်ထဲက ဖွင့်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် ၇ နှစ်ကျော် ၈ နှစ်ပြည့်တော့မှာပါခင်ဗျာ။
အစ်ကိုတို့ Spa မှာ ရနိုင်တဲ့ Services လေးတွေ တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါလား?
ကျွန်တော်တို့ Spa မှာ ရရှိနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကတေ့ာ Foot Reflexology Massage Foot Dry Massage Head Dry Massage Head (Oil) Massage Head and Shoulder (Oil) Massage Full Body Dry Massage Japanese Traditional Massage Body Scrub & (Oil) Massage Foot & Body (Oil or Dry) Massage Aroma Therapy Oil Massage Swedish (Oil) Massage Deep Tissue (Oil) Massage Upper Body (Dry) Massage Upper Body (Oil) Massage ‌တွေရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဈေးနှုန်းလေးတွေကရော..အနည်းဆုံးကနေ အများဆုံး ပျမ်းမျှရှိသလဲအစ်ကို ?
ဈေးနှုန်း‌လေးတွေကတော့ အနည်းဆုံး 10000 ကျပ်ကနေ အများဆုံး 30000 ကျပ်အထိရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။
Spa အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေက ဘယ်နိုင်ငံက အဓိကထားပြီး တင်သွင်းသလဲ?
လက်ရှိကတော့ ထိုင်းနိုင်ငံကနေတင်သွင်းတဲ့ သံလွင်ဆီ၊ နှင်းဆီနဲ့လုပ်ထားတဲ့ အဆီ၊ စပါလင်ဆီတို့ကို လက်ရှိပြည်တွင်းဈေးကွက်ကနေပဲ ဝယ်ယူသုံးပါတယ်ခင်ဗျာ။
Spa အမြဲသွားသင့်သလား၊ ဘာကြောင့်လဲ ဗဟုသုတလေး မျှဝေပေးပါနော်?
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုက်နှစ်သက်တာ‌ကြောင့် ကျန်းမာရေးအရ တစ်ပတ်ကို အနည်းဆုံးတော့ ၂ ကြိမ်လောက်တော့ သွားသင့်ပါတယ်။ ဗဟုသုတအနေနဲ့မျှဝေရမယ်ဆိုရင်တော့ လူတိုင်းမှာစိတ်ဖိစီးမှုများစွာ အလုပ်အကိုင် ပင်ပန်းမှုများအတွက်နဲ့ ကျန်းမာရေး အတွက်ပါ အထောက်အကူအဖြစ် သွားသင့်တဲ့နေရာမျိုးမို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
ကျွန်မတို့ wbsite yourfitster အတွက် ဘာများပြောချင်တာရှိသေးလဲ?
အခုလိုကျွန်တော်တို့လို ဧည့်သည်ကိုစပြီး မားကတ်တင်း အားနည်းနေချိန်မှာ ဆက်သွယ်မေးမြန်း ပြန်လည် မျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ လူကြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အချိန်ရမယ်ဆို လာရောက်လေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်နော်။